Induction Hot Forming Stainless Steel Tape misy lafaoro fanalefahana ny induction
Home / Applications / Induction Forging / Fantsom-panafody mafana miendrika induction
Induction Hot Forming Tape tsy milamina
Sokajy: Induction Forging Tags: mamorona mafana, fampidirana mafana, hafana ny fametrahana induction, mofomamy tsy milamina, mafana mahamay stainless steel dingana, fanorana mony, induction tape mafana mamorona
Tape fantsom-pandrefesana mafana mifangaro amin'ny fitaovana fanamafisam-peo matetika
Tanjona: manafana ny kasety "J" tsy misy fangarony hatramin'ny 3000F avy amin'ny hafanan'ny efitrano amin'ny 15 metatra isa-minitra. Hafanaina ny fitaovana hanampiana amin'ny famoronana endrika "J" avy amin'ny tahiry fisaka.
Fitaovana: Tape "J" tsy misy fangarony mirefy 0.562 ″ ny sakany, 0.028 ″ matevina ary omena sakafo tsy tapaka.
Fampiharana: Ny famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mahery vaika DW-HF-15kW miaraka amin'ny coil helical mahitsizika dimy ambin'ny folo (15) dia hita mba hamokarana izao valiny manaraka izao:
* 3000F dia tratra tamin'ny fizarana 6 ″ tao anatin'ny 2 segondra tao anatin'ny fitsapana statika izay nadika ho 15 metatra isa-minitra.
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidiran-ketra mahery vaika DW-HF-15kW ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy capacitor iray (1) miaraka amin'ny sandan'ny 1.2 μF, ary coil boribory boribory dimy ambin'ny folo (15) mihintsy 6 ″ lava, 1 1 / 4 ″ sakany ary 1 ″ ambony.
Matetika: 80 kHz
Induction Fandrobana varahina vy